Top 3 Mmemme nkwado ndabere na mpaghara iPad
> Resource> Nyefee> Jiri iTunes, iCloud na Wondershare TunesGo nkwado ndabere na mpaghara iPad
Gị iPad bụ n'ezie akụ gị ebe ị nwere niile na hụrụ n'anya ọdịnaya n'ụdị kwesịrị ncheta foto, hụrụ n'anya videos, music na ọtụtụ ndị ọzọ na ọdịnaya. Ọfọn, niile a dị oké mkpa data kwesịrị nwere ndabere mere na ị pụrụ hụ na ya ndụ nnweta. The data na i nwere na gị iPad nwere ike zọpụta ma ọ bụ kwadoo.
# 1. Ndabere iPad na iTunes
# 2. Olee otú ndabere iPad ka iCloud
# 3. Ndabere music, video na foto na iPad na Wondershare TunesGo Ochie
Akụkụ mbụ nke ntụle a ga-aza ajụjụ "Olee otú m ndabere m iPad". iTunes enyere eke backups gị iPad bụrụ na otu ụbọchị, ị chọrọ ụfọdụ faịlụ azụ mgbe ị ihichapụ ha. Otu iPad nwere ike kwadoo aka iji na-esonụ:
Wụnye ọhụrụ version nke iTunes na jikọọ na gị iPad gị na kọmputa site na iji eriri USB na;
Pịa View> Gosi sidebar. N'okpuru Ngwaọrụ, pịa gị iPad.
Pịa Summary taabụ na n'elu nke window ke ziri ezi. Wee si ebe a, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Iji Computer" na "Back Up Ugbu a". Họrọ ha.
Cheta na: Media faịlụ nke i synced site na kọmputa nwere ike ghara kwadoo. Nkwado ndabere na mpaghara songs, videos, foto, wdg m atụ aro ka ị na-agbalị Wondershare TunesGo Ochie. Ndabere maka iPad kere site ihe iTunes agụnye ntọala gị iPad, kalenda akaụntụ, na akwụkwọ ahụ aja, na ndị ọzọ. N'otu aka ahụ nkwado ndabere na mpaghara nke music nke e zụrụ a adịghị na mba niile, na ndabere maka TV na-egosi nke e zụrụ nanị etịbe ke United States.
Nke akụkụ a nke exposition aza ajụjụ nke otú ndabere iPad ka iCloud. iCloud Akwadoo elu ọtụtụ ná ndị data na i nwere na iPad agba ọsọ na-iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. N'ihi na akwado gị iPad na iCloud, ị ga-eso ndị dị mfe usoro nyere n'okpuru.
Jikọọ gị iPad na WiFi. Gaa na taabụ "Mwube" wee pịa bọtịnụ "iCloud". Ọzọ mkpa ka ị họrọ nhọrọ "ndabere na Nchekwa". Ugbu a gị na ngwaọrụ e kwadoo on iCloud ọ ga-agba ọsọ na a kwa ụbọchị ndabere maka dị ka ogologo oge dị ka:
Ị na-ngwaọrụ gị ejikọrọ na internet site na iji Wi-Fi
Ọ na-ejikọrọ na ụfọdụ ike isi iyi
Nwere ị furu efu gị music n'ihi a kọmputa idozi, usoro reinstall ma ọ bụ n'ihi na iTunes okuku? Chọrọ gị playlist ịbụ onye a kpaliri ọzọ kọmputa? Ọ bụghị a nnukwu ihe ọzọ n'ihi Wondershare TunesGo Ochie bụ ihe iPad ndabere software nke-enye gị ka mfe nyefee videos, music, Podcast, listi ọkpụkpọ ma ọ bụ iTunes U si iPad ka iTunes.
Gbalịa Wondershare TunesGo Ochie for free ugbu a!
Nkwado ndabere na mpaghara music, videos, listi ọkpụkpọ, na foto na ihe iPad gị na kọmputa ma ọ bụ iTunes Library na Wondershare TunesGo, ị kwesịrị ị na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Download na wụnye Wondershare TunesGo Ochie na kọmputa gị. Na mgbe ahụ jikọọ gị iPad gị na kọmputa site na eriri USB.
Ẹkedori Wondershare TunesGo Ochie na ọ ga-egosipụta gị iPad na ya isi window. Si ebe a, ị pụrụ ịhụ ọtụtụ ohere ngwangwa ka ndabere gị iPad music. "Iji iTunes"-enye gị ohere idetuo listi ọkpụkpọ na songs si gị iPad gị iTunes Library. "Iji nchekwa" pụtara na ị pụrụ ndabere gị iPad music na nchekwa na kọmputa gị. Site na itinye akara panel ọ bụla ụdị faịlụ, ị pụrụ ịhụ atụmatụ ndabere gị iPad kwa.
Gbalịa Wondershare TunesGo Ochie (Mac) nkwado ndabere na mpaghara gị iPad on Mac ugbu a! Ọ bụrụ na ị nwere a Windows PC, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo Ochie Windows version.